Ungena njani phakathi kwezilayidi kwi-PowerPoint
Ukuhamba usuka kwesinye isilayidi uye kwesilandelayo kwi-PowerPoint 2013 okanye ukuqala ucoceko olulandelayo kwi-slide kwisilayidi, cofa iqhosha lasekhohlo le mouse. Yiyo yonke into ekufuneka uyazi kwinqanaba elisisiseko.
Unokufumana i-fancier kakhulu kunaleyo malunga nokuhambahamba. Ungasebenzisa izitshixo ezinqumlayo ukuya kwiindawo ezithile, kwaye ucofe ekunene kwaye usebenzise imenyu emfutshane ebonakala ngathi iyahamba.
Cofa ekunene kwaye ukhethe uNcedo ekuboniseni uMboniso weSilayidi ukuze ufumane uluhlu lwezitshixo ezinqumlayo ezikhoyo.
Unokusebenzisa amaqhosha kwikona esezantsi ekhohlo kwesikrini kuMboniso weSilayidi. Batyhafile kakhulu ekuqaleni, kodwa ukuba ushenxisa isikhombisi semouse ngaphezulu kwesinye, siqina. Cofa iqhosha ukuvula imenyu okanye ucofe iqhosha lasekunene- okanye lasekhohlo apho ukuze uye phambili kwaye ubuyele kumboniso.
Vula intetho yakho.
i-magnesium kunye ne-vitamin c ithathwa kunye
Kwi uMboniso weSilayidi thebhu, cofa indawo yokuqala.
Isilayidi 1 siyavela kumbono woMboniso weSilayidi.
Cofa ukuhambisa kwisilayidi 2.
Cinezela umgca wesithuba ukuhambisa kwisilayidi 3.
Cinezela iqhosha elisekunene ukuya kwisilayidi 4.
Cinezela iqhosha lokungena ukuze uhambe kwisilayidi 5.
Ubone nje iindlela ezine ezahlukeneyo zokuqhubela phambili kwisilayidi esilandelayo.
Cinezela iqhosha lokubuyela umva ukuya kwisilayidi 4.
Cinezela iqhosha elitsolo lasekhohlo ukuhamba kwisilayidi 3.
Ngoku uyazi iindlela ezimbini ezahlukeneyo zokubuyela umva kwintetho.
Cofa ekunene naphi na, khetha Zonke iZilayidi, emva koko ucofe isilayidi 1.
Eli nani libonisa iithonjana ezibonakala xa ukhetha Zonke iZilayidi.
Sebenzisa le ndlela, ungatsiba nakwisiphi na isilayidi osifunayo, nangaliphi na ixesha.
Hambisa isikhombisi semouse kwikona esezantsi ekhohlo kwesikrini kwaye usebenzise isikhombisi ngaphezulu kweempawu apho.
Inani libonisa zonke ii icon. Ezimbini zokuqala zezo zangaphambili nezilandelayo; ungazisebenzisa ukuhamba phakathi kwezilayidi njengenye indlela yezitshixo kunye neendlela zegundane ozifundileyo ngaphambili.
I-icon yePen ivula imenyu apho unokukhetha khona isixhobo sokubhala (Isikhombisi seLaser, iPen, i-Highlighter, okanye i-Eraser) kunye nombala wepeni. Ezi zigutyungelwe kwimithambo elandelayo.
Iqhosha lokubonisa iZilayidi zonke linikezela ngenye indlela ngokunqakraza ekunene nokukhetha uBonisa Zonke iZilayidi, njengoko wenzile kwiNyathelo 9. Ibonisa igalari yezithonjana zesilayidi, eziboniswe apha.
Iqhosha le-Zoom likuvumela ukuba usondeze kwindawo ethile yesilayidi esibonisiweyo ngoku.
Iqhosha leMenyu libonisa imenyu yokuhamba apho ungatsiba khona kumboniso wesiko, setha iscreen kunye notolo ongakhetha kuzo, ufumane uncedo, kunye nokunye.
Cofa kwiqhosha leMenyu.
Imenyu iyavela. Jonga lo mzobo.
Khetha Umyalelo wokugqibela wokujonga kwimenyu.
Isilayidi 3 siyavela kwakhona.
Cofa kwiqhosha leMenyu kwakhona, yalathe kwiScreen, kwaye ukhethe iScreen Screen.
Isikrini siba mnyama. Unokusebenzisa oku ukukhupha okwethutyana isikrini ukuze ube nengxoxo, umzekelo.
Cofa ekunene isilayidi uze ukhethe iScreen → iScreen Screen.
Eli nyathelo likhuphela ngaphandle isikrini, ngaphandle kokuba ajike abe mhlophe endaweni emnyama.
Umboniso ubuyela kumbono woMboniso weSilayidi.
Le yindlela emfutshane yebhodi yezitshixo yeScreen → Umyalelo weScreen esimnyama. W yindlela emfutshane yebhodi yezitshixo yokwenza isikrini sibe mhlophe.
Umboniso weSilayidi uyavala, kwaye ubuyiselwe kumbono oqhelekileyo.
Yintoni imifuno horehound
iivithamini ezininzi ngentsimbi
ukuseta ipad entsha
iziphumo ebezingalindelwanga jet
indlela yokutolika ixabiso le-p
Iziphumo ze-lidocaine iv